Photography buye baba ingxenye kwansuku yezimpilo zethu. Ezinye ukuqonda inqubo wokuthwebula izithombe njengethuba ukuzijabulisa, abanye bazama ukubonakalisa into siqu, namanje abanye ubheke nezithombe njengoba art. Kodwa ezinye izithombe - isihloko nokuzilibazisa, kanye nomsebenzi, nemisebenzi yokudala.
konke izinguquko ngokushesha kakhulu kuleli zwe lanamuhla, Ngifuna ukugcina izinkumbulo kakhulu kule impilo-seziyaluyalu. Photography - indlela engcono kakhulu wasithatha umhlabeleli ukuthi ngokuvamile singanakwa noma ukhohliwe njengoba iminyaka idlula.
"Ngosizo izithombe, ungakwazi kubonise futhi ekhuthaza ubuntu" - ngakho uthi umthwebuli ovelele Elena Korneev, okuyinto waziphatha izithombe professional izingane. Ukuze wakhe, endaweni yokuqala ukudalwa enhle, image ikhumbuleke - okwamanje okuphakade, okungase kubhekwe ngokuphindaphindiwe iminyaka eminingi.
Ugqozi olutholwa photographer ngesikhatsi kokuhlinzwa futhi okuhloswe ngalo ukwenza kube ukusebenza esiyingqayizivele - esinye isici Elena izithombe. Bonke bangabangasokile ngaphansi kwethonya muse enhle. Ngaphezu kwalokho, u-Elena wathi kufanele wabelane ngogqozi zabo nawo wonke umuntu oku isethi, lo reciprocity wombhali kanye uhlamvu kusiza photographer ukuba anokuqonda, ngenxa yalokho, yimpumelelo.
Elena Korneev - photographer ubani okhetha aesthetics kukho konke ku isethi, empilweni, ekudleni, enkabeni yedolobha. It is waziphatha esiza abantulayo, ahlele imihlangano nge abaculi, elihambisana izimfihlo izikebhe wakhe, kuyasiza imfanelo enhle e umphefumulo womuntu.
Photo art kufana nokudlala upiyano, kuphela esikhundleni okhiye umthwebuli wabanjwa ngaleso sikhathi olulodwa, futhi okuyiwona wakhe zokubutha. ukukhuthala Kudingekile futhi ukuqeqeshwa, kuba isiqinisekiso bomsebenzi, okuyinto has Korneeva Elena. Izibuyekezo ngemdlandla kusukela yanyatheliswa kungasilahlekisela ke, nababe lucky ngokwanele ukuze uthole photoshoot wakhe, uhlala Adalberto isikhathi eside.
Elena kuyinto sijabulele ukuba neqhaza amakhono abo ukunika amandla Wabasaqalayo bazithola ubuciko izithombe. Ukuze wenze lokhu, yena ulungiselela workshop, ositshela mayelana butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela umsebenzi photographer, abelana okuhlangenwe nakho kwakhe futhi linikeza iseluleko, kusiza ukuhlaziya umsebenzi nezinye abalobi.
Enye yalezi workshop owawuse November 14, 2015, endaweni ke ayekade esesikhundleni ngesonto ngaphambi kwaleso senzakalo. Abahlanganyeli ngemfudumalo nangentshiseko ukukhuluma bezithombe ezifana Elena Korneev.
Izingane nezithombe umndeni
Uhlobo eyinhloko izithombe, okuyinto waziphatha Elena izithombe nomndeni ekumeni kwezingane. Ukholelwa ukuthi zonke izingane uhlukile, futhi izithombe zakhe ugcizelela ubunjalo lokhu.
Isibonelo elimangalisayo izithombe - izithombe omama abakhulelwe e master sabo kwembula mhlawumbe into enhle kunazo zonke emhlabeni - uthando kamama nengane, kukhona izibopho ngokungenamkhawulo enamandla.
izithombe egqamile Ikakhulukazi izingane nomama sibheke isizinda kuya zonyaka ekushintsheni bemvelo. Elena Korneev inikeza sonke uchungechunge amaphrojekthi abazinikele zonyaka kanye nezingane. Kubo eveza ubunjalo hhayi kuphela ingane kodwa futhi imizwa yakhe ngesikhathi esithile.
Esikhathini izithombe Elena lingenandawo ukudana isithukuthezi, zonke izithombe afakwa incazelo, benamandla lula nesengane, obuqotho buhle. Yonke enye into, umlobi kudala futhi isebenzisa izingubo, egcizelela ezithombe zezingane.